Home Wararka Muse Bixi oo kulan la qaatay K/xigeenka Xoghaya Guud ee QM
Muse Bixi oo kulan la qaatay K/xigeenka Xoghaya Guud ee QM
Madaxweynaha Jamhuuriyadda la magaca baxday Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo oo maalin-nimadii shalay safar shaqo ku tegay Magaalada New York ee isla dalka Maraykanka ayaa maanta xarunta guud ee Qaramada Midoobay kulan ballaadhan kula qaatay mid ka mid ah ku-xigeenka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay.
Kulankan oo ahaa mid ay albaabadu u xidhnaayeen oo ay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo ku xigeenka xoghayaha guud ee qaramada midoobay ku lafo gureen arrimo muhiim u ah Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa markuu soo dhammaaday waxa ka warbixiyey Wasiirka Arrimaha Dibeda iyo Iskaashiga Caalamiga ah, Dr. Ciise Keyd Maxamuud oo kulanka ku wehelinayey madaxweynaha.
“Maanta waxa aanu kulan la yeelanay mid ka mid ah ku-xigeenka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay oo aanu kala hadalnay qadiyada Somaliland iyo sidii ay Qaramada Midoobay kaalmooyinka ay bixiso si toos ah u siin lahayd Somaliland, iyadoo aan cidna loo soo marin,” ayuu yidhi Dr Ciise Kayd.
Wasiirka oo sii wata hadalkiisa, waxa uu yiri, “Sidoo kale, waxa aanu kala hadalnay horumarinta beeraha, Kalluumaysiga, dhibaatooyinka abaaraha soo noq-noqday iyo sidii biyaha roobka ee da’a aynu u qaban lahayn oo aynu biyo-xidheeno badan uga samayn lahayn dalkeena, markaa waanu isla qaadanay fikradahaas, waxaanu shirkaasi noqday mid guul noogu soo dhammaaday, waana guul kale oo Somaliland u soo hooyatay”.
Kulanka waxa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ku wehelinaayey Wasiirka Arrimaha Dibeda iyo Iskaashiga Caalamiga ah, Dr. Ciise Keyd Maxamuud iyo Safiirka Jamhuuriyadda Somaliland u fadhiya Dalka Maraykanka Amb. Bashiir Sheekh Cumar Good.
Kulanka ka dibna weftiga Madaxweynuhu waxay dib ugu laabteen Washington DC oo ay ka sii wadan doonaan hawlaha shaqo ee ay ku joogaan Safarkooda Dalka Maraykanka oo maalintii sagaalaad galay.
Previous article14 sano ka dib markii AMISOM dalka timid, ayaa wali lahaynin ciidan la wareega amniga dalka
Next articleSheekh Sh. Sheekh Muxuyidiin Celi oo magalaada Muqdisho ku geeriyooday